Wararkii Ugu Danbeeyey Musharaxinta Iyo Doorashada Gudoomiyaha Barlamaanka Puntland. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Diiwaan-gelinta musharrixiinta u tartamaya xilka guddoomiyaha Baarlamanka Puntland, ayaa sida qorshaysan la soo geba-gabaynayaa maanta oo Arbaco ah.
Guddiga doorashada guddoomiyaha golaha Wakiilada Puntland, ayaa maalmihii la soo dhaafay diiwaan-gelinayay musharrixiinta u tartamaysa qabashada xilka guddoomiyaha Baarlamanka.
Saddex musharrax oo kala ah; Cabdijamaal Cismaan Maxamed, Cali Axmed Dhahar iyo Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ilaa iyo hadda si rasmiya isu diiwaan-geliyay tartanka doorashada guddoomiyaha Baarlamanka oo la qorsheeyay in ay dhacdo Khamiista berriya.
Guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed, ayaa Khamiistii hore xilka laga qaaday, kadib markii ay mooshin ka gudbiyeen 44 xildhibaan oo ka tirsan Baarlamanka.
Mooshinka oo sida la sheegay ay dabada ka riixaysay xukuumadda Puntland, ayaa soo bilowday kadib markii la xallin-waayay khifaal ba’an oo in mudda ah u dhexeeyay madaxweyne Deni iyo guddoomiye Dhoobo.
Previous articleDowladda Ingiriiska oo soo saartay Digniin yaab leh “Hargaysa iyo Barbara waxay ka amni wanaagsan yihiin Muqdisho”.
Next articleAlshabaab oo Khaarijisay Gudoomiye iyo Gudoomiye kuxigeen katirsanaa Maamulka Hirshabeele.
Dab La Riday November 13, 2019 At 11:04 am
Warsangeli shirkooda soo socda waa in ay Go’aan ka Gaaraan in ay ku sii jiraan ama ka baxaan puntland.
Haddi ay gartaan in ay kusi jiraan waa in heshiiski puntland lagu sameeyey dib loogu noqda oo xukunka laga dhiga Wareegto oo laga saara Hakbada ay ku wada jiraan maxamud saleebaan haddi kale ha la isaga kala tago meesha waxba ma yaaliine
Dab La Ridey November 13, 2019 At 12:06 pm
Sxb Waan Ogahay in iidoor ay maslaxad ugu jirto in Harti iswada qabqabsado oo la heshiin waayo oo ay gacanta isa saaraan Laakin taasu kama dhacayso Reerka aan ka dhashay.
Xita Haddi aanu lugta kala baxno Puntland oo aanu diidno ”’Hakbadan”’ uu marba qaadanayo wiil maxamud saleebaan ah xita wakhtigaas u tegi meyno iidoor iyo wax la mid.
Ma necbi isaaqa laakin ogow ”’ Fartaadu haday ku xanuunto iskama jari kartid ilaa aad daweysid ”’
Majeerteen iyo anagu waxaanu wadaa nahay adna waad ogtahay marka waanu is-khilaafi karna laakin cadaawad nagama dhaxayso. Ceebta Garoowe ka dhacday waxaa sababteeda leh xisbiga diiniga ah ee uu Marxuum cabdulahi yusuf la dagaalamay oo la yiraahdo ”’ AL-ITIXAAD ”’ maantana wata magaca ah ”’AARANJAAN ”’ Xita aaranjaan ayaan majeerteen ku mideysnayn oo cumar maxamud iyo cali saleebaan wey ka soo horjeedaan waxaa wata oo keliya Ciise maxamud iyo cusmaan maxamud.
Aaranjaan aya keensaday Mr DENI iyagaana ninkay doonaan keenaya kay doonaan ka tuuraya.
Majeerteen hadday ku baraarugeen wixi uu marxuum cabdulaahi yusuf ka dagaalamay iyo dhibaatada ay soo wado waana tan hadda taagan dadki wada dhashay kala dishay.
Wiilasha ku dhintay Garoowe Lacag badan ayaanu hadda uga uruurinay Qurbaha weyna socota in Xaasaski ay ka dhinteen iyo caruurtoodi la taageero.
Isimada Puntland arinka Aaranjaan wey ka soo horjeesteen weyna diidan yihiin waxay ka wadaan GAROOWE.
Garoowe ma aha caasimad puntland ka wada dhaxaysa ee waa meel Qoys iyo jufo iyo jilib ay iska maamushaan marba kay doonaan Daaqadda kala baxaan. Caasimadda puntland qudheeda miiska ayey saaran tahay kadib wixi ka dhacay 2018/2019.
Ahmedow anagu sidaas kuma kala tagno hadaad u haysatay in walaaltinimada MJ/WAROS ay sidaas ku dhimatay laakin xaqiiqda ayaa la isu sheegaya oo waa la saxaya wixi khaldamay dib dambena uma dhici doonto wale.
Anigu hadda waxaan u socda Laasqorey oo waxaan ka qayb gelaya shirka HADAAFTIMO ka dhici doona oo ay weliba qurbaha ka iman doonaan Rag culus ama Heavyweight ah oo warsangeli ah si arinkan cakiran meel loo saaro.
Laakin waan huba siday iidoor wax u doonayaan ma noqon doonta FULL STOP !
Jamaal Ali November 14, 2019 At 12:18 am
Asc Wr Wb My People Puntland. War Kuwaan ku tartamayo ee lagu sheegay baarlamaanka Puntland,anigu waxaan u aqaan xoolo ujooga inay jeebkooda la cayaaraan. Meel dhiig lagu daadiyey, ayay intay lacag qaateen dhan $20,000 kana soo qaateen Deni uusbuur Damuljadiid iyo aaraanjaan, ayay maanta rabaan inay keenaan Mid Nacas ah oo Warsangeli ah oo Heesaa ah oo dadkiisa lalaayey oo udanqan waayey inuu noqdo Hogaanka Baarlamkaanka Puntland.
Anigu waxaa usheegaay Walaalaheena warsangeli ogaada Deni Mamathalo Cismaan Maxamuud waa nin Tuug ah u adeega Faroole Afwaliinjo iyo aaraanjaan. Deni Waa diidey inuu Maql Boqor Burhaan iyo Isimada Puntland, waa nin ku caaiyooway Beesha Cisman Maxamuud iyo shacabka Puntland. Marka Beesha warsangeli ogaada Puntland oo dhan waa idin taageersan tahay, laakiin hadda beri keentaan Mid Dabadhilif u ah Deni Uusbuur iyo aeaanjaan, Reer Puntland idin taageerimeyso, ee ku dadaala sidi aad isaga qaban lahaydeen Jabriil nacas iyo mid kale ee madaxa dhuuban.
Deni uusbuur maanta Boosaso laga qabsaday, Boosaso waa irzaaqda garoowe, dhuunta hala gooyo Garowe, haku dhintaan aaraajnjaan iyo ciise riyoolaha xaqdarada ku taageeray Deni uusbuur.
Guul ayaa urajaynayaa shacabka Puntland iskana qabta Deni Nacas iyo araanjaan dhagax ayaad uga saari kartaan Puntland hadda isku duubnaataan.
iimaaraadkana halaga ceeriyo Puntland.
Guuuuuuuuuuuuuuuuuuul Puntland. Nabadana Hala Ilaaliyo, munaafiqiinta ku jirta Puntland waa (Aaran Jaan) Aaraanjaan waa ururkii (Al-Itixaad) ee uu Colonnel Cabdu;aahi Yusuf dalka feer kaga saaray ee uu ku laayey Saliid, waxaana ubadan Ciise Riiyoole. Hala iska qabta Al-itixaad iyo aaranjaan waa isku mid.
Dab La Riday November 14, 2019 At 2:03 am
Xaqiiqda ka taagan puntland we dadka ay ku wada noqdeen CAADO QAATAYAAL. Hood ka daawo